UMntwana waKwaPhindangene ubhule umlilo obusaqala - Bayede News
UMntwana waKwaPhindangene ubhule umlilo obusaqala
by nguMntwana wakwaPhindangene
UMntwana unguNdunankulu kaZulu noMsunguli we-Inkatha Freedom Party.
Incwadi kamzukulu ayifundile iqede ukukhuluma lase labuya laba lodwa ilanga KwaZulu
Ukuvela kwezindaba ebezithi omunye wamaZinyane eNdlini yoMdlokombane inombango ngeSihlalo ikhathaze abaningi. Lokhu bekulandela ukukhuluma okuthi kukhona abeseka ukuba uMntwana uSimakade athathe kungabi nguMntwana uMisuzulu. Nokho lokho kwesaba kuphele ngokuphazima kweso njengoba uNdunankulu kaZulu ngokunxuswa yilo izinyane uSimakade ewubhulile umlilo. Encwadini uMntwana ayifunde njengoba injalo uthe: “Mangibingelele kuMntwana waKwaPhindangene – Mageba.
Bengicela ukuba uMntwana angifundele lesi sitatimende esivulelekile njengoba ngisibhalile. Ngiyezwa Mageba ukuba igama lami seliyathinteka ekubeni mina Simakade, Jackson Zulu ngifuna isikhundla soBukhosi. Ngijabulile uma ngibona uMntwana kumabonakude ezisholo ngokwakhe ukuthi angikaze ngisho nakuye ukuthi ngiyasifuna lesi sikhundla, nami ngiyakufakazela lokho.
Ngingaqiniseka ukuba angikaze ngisho kumuntu ukuthi ngiyasifuna lesi sikhundla.
Ngiyezwa Mageba ukuthi kukhona ubuhomuhomu obukhombisa ukuthi hleze kukhona abangifisela lesi sikhundla futhi ayikho into engingayenza ngemizwa yabanye abantu.
Mangicacise ukuthi ubabekazi wami uMntwana wakwaNdlovu benaye uMntwana waseKhwezi, bake basiqwashisa sizingane zeNkosi ukuthi uma iSILO noma iNdlunkulu iphakamisa igama lomunye wethu kufanele avume loyo oyobe ekhonjiwe. Ngakho-ke nami ukuba ngangiphakanyisiwe ngangiyosamukela leso siphakamiso, futhi babesixwayisile ukuba uma kuphakamiswa omunye wethu asibokwamukela futhi simeseke loyo oyobe ekhonjiwe.
Njengengane ehloniphayo nengicabanga ukuthi izithobile ngiyaqiniseka ukuthi angeke ngiweqe amagama abantu abadala njengoba besengichazile ngezeluleko ezingaphezulu. Ngiyamucela uMntwana ukuba nxa esefunda lesi sitatimende njengoba sinjalo asale esengicelela nezintatheli ukuba zingalokhu zingifonela ngalolu daba ngoba akukho okunye engingakusho ukudlula lokhu esengikushilo.
Mangithokoze Mageba, imina uMzukulu wakho, uMntwana Simakade Zulu
nguMntwana wakwaPhindangene May 14, 2021